Rosia : Nanampy Tamin’ny Fangalarana Vola 5 Lavitrisa Dolara Amerikana i Alexander Belov, Hoy Ny Polisy, Nefa Mbola Tian’ireo Mpanohitra Havotana Ihany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2014 3:01 GMT
Misy ny siosion-dresaka miely fa miomana ny ao amin'ny fitondrana Rosiana ny hampijaly — mety hoe hitondra any amin'ny famonoan-tena mihitsy—an'i Alexander Belov, iray amin'ireo fanta-daza indrindra amin'ireo mpiaro ny tanindrazana. Tsy ho sarotra akory ny hampijaly an'i Ramose Belov, izay manana ny tena anarana hoe Potkin: mipetraka ao amin'ny efitry ny fonja ao Moscow izy ankehitriny, miandry ny fitsaràna azy momba ny famotsiam-bola ary lazaina ho fanodinkodinana vola mitentina dimy lavitrisa dolara any ho any.
Mbola mijanona ho misitery moa hatramin'izao ny andraikitr'i Belov tamin'izany fangalarana mahagaga izany, saingy mieritreritra ireo mpitandro filaminana Rosiana fa manana porofo ampy tsara izy ireo mba hanamelohana azy ho nanitsakitsaka ny lalàna 174 sy 159 momba ny ady heloka bevava, izay afaka mandefa am-ponja azy fito taona sy folo taona tsirairay avy.
Ahoana moa no haha-marina hoe Rosiana mpiaro ny tanindrazana—mpitarika fahiny ny fikambanana voarara ankehitriny “Fikambanana Manohitra ny Fifindra-monina tsy Ara-dalàna” (DPNI) —ho nanampy tamin'ny fangalarana dimy lavitrisa dolara? Milaza ireo mpitory an'i Belov fa niasa ho an'i Mukhtar Ablyazov izy, Kazakh mpanam-bola be sy be fahefana izay noharina matetika tamin'i Boris Berezovsky sy i Mikhail Khodorkovsky. Araka ireo mpampanoa lalàna, nokaramain'i Ablyazov i Belov ny taona 2011, mba handalina sy hikotrika hetsika fitiavan-tanindrazana tany Kazakhstan, izay nanana tanjona ny hampalefaka ny fitondran'ny filoha Nazarbaev. Rehefa nandeha ny fotoana, Ablyazov, izay voatazon'ny fonja Frantsay ankehitriny ary mety haondrana hiverina any Rosia, dia lazaina fa nametraka fitokisana kokoa tamin'i Belov, izay nasainy nisahana ny tontolon'ny ara-bolany rehetra mandrapahatongany.
Ny 15 Oktobra, nosamborina voalohany i Belov ary natao tany amin'ny toerana tsara ambina ny 17 Oktobra. Dimy andro taty aoriana anefa, nampian'ireo mpampanoa lalàna vesatra fanaovana hosoka ny fanamelohana azy, izay nahatonga ny mpitsara hamindra ny fitazonana vonjimaika an'i Belov any amin'ny fonjan'ny firenena mialoha ny fitsaràna azy. Araka ny tenin'ireo mpitandro filaminana nanao ny fisamborana, niavaka kely ny fihetsik'i Belov nandritra ny fisavàna ny tranony. Nilaza ireo mpitandro ny filaminana fa nandà tsy hanoro azy ireo ny misy ny pasipaorony izy, nanandrana ny hitsoaka teo amin'ny varavarankely (nandratra ny lamosiny tamin'izany), ary nihinana antontan-taratasy lazaina fa manohitohina azy mihintsy aza, mba tsy hamela io ho tonga eny an-tanan'ireo manampahefana.
Navaivay tamin'ity herinandro ity ny ahiahy mikasaika ny fiarovana ara-batana an'i Belov any amin'ny fitazonana vonjimaika, taorian'ny nanoratan'ny rahalahiny, Vladimir Basmanov, tao amin'ny LiveJournal mikasika ny tetikasan'ny Sampam-piarovana Federaly (FSB) ny hampijaly an'i Belov any am-ponja:
Mpanohitra fanta-daza maro no nanohana ilay hetsika, namerina nanaparitaka ilay lahatsoratr'i Basmanov tao amin'ny LJ. Alexey Navalny, izay iharan'ny tsy fahafahana mivoka ny trano ankehitriny, dia efa niara-niasa tamin'i Belov tany aloha. Niantso ireo mpamaky i Navalny mba hanampy azy izao:
Mark Feygin, iray amin'ireo mpisolovava teo aloha ny Pussy Riot, milaza fa mampahatsiahy azy ny nanaovan'ireo mpiandraikitra ny fonja an'i Ilya Goryachev, iray amin'ireo narovan'i Feygin taloha, ilay lazaina ho tsikombakomba atao an'i Belov ankehitriny. (Goryachev, izay nanandrana namono tena vao niandoha kely ny taona, dia nanamafy fa nampijaliana izy tany am-ponja.)
Na dia eo aza ny fanohanan'ny vahoaka, toa tsy miha tsara ny raharahan'i Belov, izay tsy dia ratsy foana hatrizay ny fifaneraserany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana. Ny taona 2006, ohatra, nanatrika fanasàna hisakafo tany Kremlin, mba hankalaza ny “Andron'ny Mpitandro filaminana” izy, izay nireharehàny ny fisian'ireo olom-pantany ao amin'ireo mpitondra ambony misahana ny fitsikilovana ifotony ao Rosia. Valo taona taty aoriana, voahidy ao amin'ny efitranon'ny fonja ao “Vodnik” izy, tsy dia misy ireharehany intsony ingahirainy.